Umthandazo wesandla esinamandla Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Xa sithandaza sihlala sicela ukulingana ngaphambi komnqweno, i umthandazo wesandla onamandla kaThixo ubumbene kulo mnqweno wobulungisa, ubulungisa namandla oPhakamileyo, phambi kwetyala okanye amava aphilileyo.
Ukuprintwa kwesandla esinamandla
1 Kutheni le nto sithandaza umthandazo wesandla esinamandla?
2 Umthandazo wesandla onamandla
2.1 Umthandazo wesandla onamandla wezempilo kunye nomsebenzi
2.2 Umthandazo wesandla onamandla wothando
Kutheni le nto sithandaza umthandazo wesandla esinamandla?
Xa sithandaza sicela uThixo kweli lizwe lokuzisola, uloyiko kunye neenjongo ezimbi ukuze kwenziwe ukuthanda kwakhe kunye nobulungisa. Yiyo loo nto xa sisithi uMthandazo wesandla esinamandla, sigcwalisiwe yintsikelelo engcwele nomoya kaThixo.
Ekuqaleni kobuKristu bamaKatolika, umfanekiso kaThixo awunakubonakaliswa, wawumntwisiwe kuphela ngomzobo wesandla sasekunene esivulekileyo. Ngale ndlela, ukubona isandla kukhawulwe njengegunya likaThixo. Olu luvo lwalumelwe nakwezinye iinkcubeko zonqulo ezinje ngobuJuda, ubuSilamsi kunye nezithixo zodwa.
Ngale ndlela, xa sijonga isandla sikaThixo, kufuneka siqwalasele amandla akhe akhoyo kubo bonke el mundo kunye nokukhuselwa kwabo bonke abantwana babo kwaye yiyo loo nto xa sithandaza lo mthandazo unamandla, kufuneka siwenze ngokholo olukhulu kunye nomnqweno wokuba izicelo zethu zizalisekiswe.
Nangona kunjalo, abafundi bezakwalizwi abahlukeneyo bayifundile intsingiselo yesandla esinamandla sikaThixo, xa simelwe sisandla sonke kwaye kwabanye sitsalwa ngomqolo, sifikelela kwizigqibo ezibini ezifanelekileyo: eyokuqala iveza amandla kaThixo kunye nokukhusela abantwana; kwaye okwesibini, kubonisa isenzo samandla akhe ngenxa yohlobo lobuthixo.
Siyakumema ukuba undwendwele iphepha lethu kwaye ufunde inqaku lethu malunga Umthandazo wegazi likaKristu Oko kunokuba nomdla kolu phando lokholo kunye nobizo lukaThixo wethu iNkosi yethu.
Ngalo lonke ixesha jonga indlela ekhokelela kuThixo weNkosi yethu, kwaye leyo ngumthandazo
Lo mthandazo uyasinceda xa sifuna ukucela ukukhuselwa, sinokuwuthandaza yonke imihla nangaliphi na ixesha, oko kukuthi, awunalo ixesha elithile, indawo okanye usuku lokwenza, kufuneka sikwenze ngokuzinikela okukhulu nokholo kuba lukhumbula ukuba uThixo usoloko esecaleni kwethu, uyasimamela.
Bawo waseZulwini othandekayo, kuye lonke uzuko nembeko. Ndiyaqonda ukuba nguwe kuphela umncedi wethu, ukuba andinto yanto, okanye nabani na ngaphandle kwakho.
Ukholo lwam likuwe. Bawo, ulithemba lam ngenxa yokuba uyabaphakamisa abathobekileyo bentliziyo kwaye abanekratshi uyabahlula ekukhanyeni.
Enkosi ngokukhusela usapho lwam nam, imini nobusuku.
Isandla sakho esinamandla masiphume xa ububi buza kundixinzelela. Isandla sakho esinamandla sandibamba xa usizi neentlungu zindiwele.
Beka kwindlela yam amathuba amahle kunye nayo yonke into enokwakha ubomi bam. Kwangathi isandla sakho esinamandla okanye uThixo angandixhasa kwimpilo, emsebenzini kunye nokuchuma. Thixo wam, ndifuna ngokukhethekileyo (beka iimfuno zakho ezikhethekileyo apha).
Isandla sakho sokunene samandla, kude kum, abantu abakhohlakeleyo, abanomona, abahlebi, abakhukhumeleyo, abazingcayo nabakhohlisayo.
Faka ngaphakathi kum intliziyo evuselelweyo ngezipho zothando, ukuzincama, umgudu, uqeqesho, unyamezelo kunye nesisa.
Hlala ebomini bam undiguqule. Ndikubuza yonke lento, ngegama likaYesu.
Umthandazo wesandla onamandla wezempilo kunye nomsebenzi
Xa uziva ungazinzanga ebomini bakho, nokuba kungenxa yempilo okanye ingxaki yomsebenzi, sikucebisa ukuba uthandaze lo mthandazo apho imithandazo yakho iya kuphendulwa kuThixo wethu.
Bawo waseZulwini kunye neNkosi ethandekayo evela phezulu wenze yonke into ekhoyo kwindalo yonke, wadala into nayo yonke into enobomi.
Enkosi ngazo zonke izibonelelo zakho, ngothando lwakho kunye nokunyaniseka.
Ndiyakucela, namhlanje Bawo, ukuba wolule isandla sakho esinamandla usixhase kunqongophele, wamkele umthandazo wethu namhlanje usiphe inceba.
Umsebenzi wam nendlu yam yeyakho kuba ndiyaqonda ukuba ndiyifumene kuwe.
Ndicela ukuba undikhaphe ube nam emsebenzini wam. Kwanga ukutya kwekhaya lam kungafika ngesandla sakho.
Ndincede, ndiyakucela namhlanje ngolwazi nobulumko bokulawula ishishini lam ngendlela ebalaseleyo.
Kwangathi ukholo lwam kuwe, kunye nomzamo endiwenzayo, uvelisa iziqhamo kunye nokubonelela kuninzi.
Yenza lo mkhonzi wakho isixhobo sokusikelela ummelwane wam, abantwana bam, iqabane lam kunye nosapho lwam.
Ndihambisa ezandleni zenu impilo nentlalontle ekhayeni lam.
Ndicela konke oku egameni loMsindisi wethu uYesu Krestu.
Umthandazo wesandla onamandla wothando
Kukho okwahlukileyo komthandazo okuvumela ukuba ucengceleze igama ngalinye ngokholo olukhulu ukufezekisa impumelelo oyifunayo eluthandweni. Lo mthandazo, njengangaphambili, kufuneka ubonakaliswe ngokucacileyo kwaye ngokusuka entliziyweni, ukuze ngale ndlela izicelo zethu ziphakanyiswe kwaye sikwazi ukufikelela kwinjongo.
Ngexesha lokuphuhliswa kwalo mthandazo, ayicelwa kuphela uthando lwesibini, kodwa nokuziva olo thando lusimanyayo neNkosi yethu, uThixo. Usapho nabantwana nabo bayakhankanywa, njengenxalenye ebalulekileyo yobomi bomntu ocengceleza umthandazo.Kamva, iminqweno abanayo ngesi sibini iyavakaliswa, iyenza icace into yokuba yonke into iyasikelelwa sisandla esinamandla; ukuvala isigwebo ngo:
Ndicela oku egameni likaYesu unyana wakho oyintanda.
Ngayo umthandazo wesandla onamandla Sifumana intsikelelo kaThixo iNkosi yethu, ukuba sifumane izibonelelo kungekuphela nje ngezinto eziphathekayo kodwa nangokwasemoyeni, ngale mithandazo sinokusondela kuye.
Ngokufanayo, hlala ukhumbula ukuba le yimithandazo enamandla apho usondela kuThixo. Kwangokunjalo, izicelo kufuneka zihlala zithembekile, kwaye zingonzakalisi abanye, nabuphi na ububi onqwenela okanye obubunqwenelayo buya kubuyela apho benziwe khona, kuya kufuneka uthumele ukukhanya kunye nothando kwaye uyiphelise. Siyakumema ukuba ubukele le vidiyo ilandelayo: